Fampiharana ny milina CO2 Laser ho an'ny sehatra tsy metaly - Laser volamena
CO2 Laser Fangatahana
Ny firesahana ny fisarahana miraoka-paka, ny lamba fanenona dia tena ilaina amin'ny fampandehanan'ny orana. Ny milina fanamboarana laser natao manokana dia afaka mamorona mety tsara amin'ny takelaka misy sivana.
Amin'ny fanapahana sy fikapohana ireo fantsom-pifamoivoizana, ny rafi-pandrefesana laser dia manana tombony azo tsapain-tanana raha oharina amin'ny rafitra fanodinana famonoana ho faty. Ny fanodinana laser no mampiasa fomba fanodinana mafana. Tsy misy fraying amin'ny fitaovana.
Tsy toy ny ankamaroan'ny akora tsy vita amin'ny vy, ny fitaovana insulation dia mitaky fiasa maharitra sy maharitra kokoa. Laser no fitaovana manapitrika indrindra amin'ny tontolo iainana ho an'ny fitaovana insulation.
Rivotra amin'ny rivotra
Ny tombony maro amin'ny fampiasana takelaka an'habakabaka lamba dia mampitombo ny fitak'izany. Ny mazava sy ny fahombiazan'ny fametahana laser dia afaka manamaivana ny fomba fanao fanodinana lamba.
Ny mpanjifa manenjika akanjo manokana dia ny fironana amin'izao fotoana izao. Ny fampiasana milina fanoratana laser hanapaka ny lamba lamba hamatotra ny fotoana sy hanomezana ny filan'ny vokatra namboarina.
Ny marika GOLDEN LASER vita amin'ny marika laser dia fanapahana ho an'ny famaranana vita amin'ny marika, dia teknolojia fampiatoana tsipika an-tsipika izay manova ny haingam-pandeha sy asa antonony azo antoka sy mahomby, mahavita manodika ny làlam-pandehanana manontolo.
Vahaolana vita amin'ny hoditra sy kiraro volamena Laser, manana rafitra fanaraha-maso mihetsika avo lenta, manambatra ny fomba fanaovana digitalization, grading ary manan-tsaina mandranty ary manana fiasa hafa miaraka amin'ny teknolojia laser tsy mitombo ho fanoloana ny fanapahana fitaovana mahazatra ...
Vahaolana indostrialy vita amin'ny volon-damba volamena Laser dia novolavolaina ho an'ny famokarana batch kely, ny fananganana tokana sy ny fanamboarana, ny firafitra vita amin'ny lamba ary ny fanamboarana akanjo vita amin'ny haingam-pandeha avo lenta ...